Ogaden News Agency (ONA) – Jawaasiis Wayaanaha Kagoostay & Xaalka oo Sii Xumaaday.
Jawaasiis Wayaanaha Kagoostay & Xaalka oo Sii Xumaaday.
Xog rasmi ah oo soogaadhay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in ay kala xadhig furteen dhamaan jaajuusiintii wayaana dibada uga shaqayn jiray iyo taliska wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelay waxaa xukuumada siiliicaysa ee wayaanaha xidhiidhka ujaray inta badan kooxdii xukuumada wayaanaha u ahayd basaasiinta ama jaajuusiinta ee wadamada dibada kuwaas oo ubadan wadamada Africa.
Sababta ay jaajuusiintu uga tageen shaqadii loodiray ayaa lagu sheegay laba arimood oo kala ahaa in ay waayeen woxoogaagii sandareerada loosiin jiray ee lacagta ahayd iyo arinta kale oo ah in ay u adkaysan waayeen ciidanka wayaanaha oo kutunta shacabkoodii kunoolaa gudaha wadankii.
Warka ayaa intaas kudaraya in xukuumada musalafsan ee wayaanuhu ay jaajuusiinta ku war galisay in mushaarkooda yar lagusiin doono lacagta Birr ka Itoobiya kadib markay xukuumada wayaanuhu wayday lacagtii dooller ka ahayd sidaas darteedna ay ku xisaabtami doonaan lacagta Itoobiya oo ah lacag aan wax macno ah lahayn.
Sidoo kale xukuumada ayaa shaqaalahan ay jaajuus nimada udirsatay shacabkoodii kuhaysa gumaad aan laqiyaasi karin waxayna arintan keentay in ay dhamaan jaajuusiintii wayaanaha ee dibadu magan galiyo siyaasadeed waydiisteen wadamada ay joogaan.
Sida aan lawada soconay waxaa wadanka sii burburaya ee Itoobiya bilihii lasoo dhaafay ka goosanayay dad magac iyo maamuus ku dhex lahaa bulshada sida Wariyeyaal, Fanaaniin, ciyaartooy, duuliyeyaal, siyaasiyiin iyo dad kale oo magac kudhex lahaa bulshada kuwaas oo dhamaan ka firxaday dhibaatada joogtada ah ee kajirta Itoobiya.
Sikastaba ha ahaatee jaajuusiintan ugu dambeeyay ee goostay ayaa shaqadii xukuumada wayaanaha curyaamin doona waxaana cirka isku siishareeri doonta kala shakigii saraakiisha wayaanaha.